कोरियामा कुकुर पाल्न अब दर्ता गर्नुपर्ने, दर्ता नगरी पालेमा यति ठूलो जरि-वाना हुन सक्ने ! - Thulo khabar
कोरियामा कुकुर पाल्न अब दर्ता गर्नुपर्ने, दर्ता नगरी पालेमा यति ठूलो जरि-वाना हुन सक्ने !
सोउल : दक्षिण कोरियामा अब घरमा कुकुर पाल्न पनि दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। यहि अक्टोबरबाट लागू हुने नयाँ नियमअनुसार दर्ता नगरी कुकुर पालेको खण्डमा अधिकतम ६ लाख वन सम्म जरि’वाना हुन सक्नेछ।
कोरियामा कृषि तथा खाध्य मन्त्रालयले आइतबार गरेको घोषणा अनुसार आउने अक्टोबर १ बाट कोरियाभर नयाँ नियम लागू गरिनेछ। अक्टोबर १ बाट घरपालुवा जनावरसम्बन्धि नयाँ नियमहरु लागू हुनेछ। अब कुकुर पाल्दा दर्ता गर्नुपर्ने तथा बाहिर सार्वजनिक स्थानमा लिएर हिँड्दा अपनाउनुपर्ने
सावधानीका कुराहरु नयाँ नियममा आउनेछन। अनिवार्य दर्ता गर्नुपरेपछि जनावरका मालिकहरुमा आफ्ना पालुवा जनावरमाथिको दायित्व बोध हुने भएकाले वेवारिसे रुपमा छाडिने कुकुरहरुको संख्या घट्ने विश्वास लिइएको छ।
अबदेखि कोरियामा २ महिना वा सोभन्दा बढि उमेरका कुकुरहरु नजिकैको स्थानिय सरकारका निकायहरुमा
वा स्थानिय भेटेनरी क्लिनिकहरुमा गई दर्ता गर्न सकिनेछ। दर्ताभएपछि कुकुरलाई लकेट अथवा एलेक्ट्रिक माइक्रोचिपमध्ये एक लगाईदिनुपर्नेछ। यसमा कुकुरको पहिचानसम्बन्धि जानकारी राखिएको हुन्छ। इलेक्ट्रिक माइक्रोचिप कुकुरको छालामुनि राखिन्छ।
यदि पहिलोपटक कुकुर दर्ता नगरी पालेको पाइएमा २ लाख वन जरिवाना हुनेछ। यदि दोश्रो पटक पनि दर्ता नगरेको पाइएमा ४ लाख तथा तेश्रो पटक पनि दर्ता नगरेको भेटिएमा ६ लाख वन सम्म जरिवाना लाग्नेछ।
त्यसैगरी कुकुरलाई घाँटिमा साङ्गलोले नबाँधी सार्वजनिक स्थानमा लगेमा २ लाख वन सम्म जरिवाना हुनेछ। यस्तो काम दोश्रो पटक दोहोराएमा ४ लाख तथा तेश्रो पटक पनि अटेर गरेमा ६ लाखसम्म जरिवाना लाग्नेछ। -इपिएस साथी बाट